Ukucwaninga okubucayi kuyadingeka njengoba i-EPA ifuna ukufaka okokuxhumana nomdlavuza ku-Monsanto herbicide
Posted on December 13, 2016 by UStacy Malkan
Ama-glyphosate geek ahlangana eWashington kuleli sonto. Ngemuva kokubambezeleka kwezinyanga ezimbili, i-Environmental Protection Agency (i-EPA) ibambe imihlangano izinsuku ezine kuhloswe ngayo ukuhlola ubufakazi obenza noma obungahlanganisi i-herbicide esetshenziswa kakhulu emhlabeni - i-glyphosate - nomdlavuza.
Ososayensi, izishoshovu kanye nabaholi bemboni yezolimo bonke kulindeleke ukuthi bakhombise ukuvikela noma ukuhlasela ikhemikhali okwamanje elisenkingeni yezimpikiswano zomhlaba. Ngaphezu kwama-250,000 imibono yomphakathi ifakiwe ku-EPA ngaphambi komhla imihlangano kaDisemba 13-16, futhi i-ejensi ibhinca amahora angaphezu kwayishumi abantu beyethule imibono yabo ngaphambi kokuba iphaneli eliqokwe ngokukhethekile lezeluleko zesayensi liqale ukusebenza.
Ukunikezwa kwephaneli: Ukunikeza iseluleko sokuthi i-EPA kufanele ihlaziye futhi ihumushe kanjani idatha efanele nokuthi konke kufanele ihumushe kanjani ibe yisigaba se-EPA "carcinogen risk" se-glyphosate.
Lo msebenzi ungowokufunda ngokwakhiwa, kepha amandla amakhulu ezomnotho asebenza kanzima enethemba lokuthinta umphumela. IGlyphosate yingane eyizigidigidi zamadola, isithako esiyinhloko se-Roundup herbicide kaMonsanto Co. kanye namakhulu eminye imithi yokubulala ukhula edayiswa emhlabeni jikelele. Futhi yi-lynchpin yezitshalo ezithengisa kakhulu zikaMonsanto, ezibekezelela i-glyphosate, izakhi zofuzo.
Ukulawulwa okusemthethweni kokukhathazeka ngomdlavuza kungalimaza umugqa ophansi weMonsanto, ingasaphathwa eyokuthi kuhlelwe ukuhlangana kwama- $ 66 billion neBayer AG, kanye nezinye izinkampani zezolimo ezithengisa imikhiqizo ye-glyphosate. IMonsanto nayo ibhekene nezinsolo ezingaphezu kweshumi nantathu mayelana nokukhathazeka ngomdlavuza we-glyphosate futhi idinga ukuxhaswa yi-EPA ukuvikela ezenzweni zenkantolo.
Imibuzo ephathelene ne-glyphosate nezinkinga zezempilo ayintsha. Izifundo eziningi zesayensi emashumini amaningi eminyaka ziye zaphakamisa ukukhathazeka ngemithelela eyingozi ye-glyphosate. IMonsanto ibilokhu iphikisana nezifundo zayo kanye nophiko lososayensi abasekelayo abathi i-glyphosate ayiyona i-carcinogenic futhi ingenye yezibulala-zinambuzane eziphephe kunazo zonke ezake zalethwa emakethe.
Ngonyaka owedlule impikiswano yashuba kakhulu ngemuva kokuthi ithimba lososayensi bomdlavuza bamazwe omhlaba abasebenza neWorld Health Organisation (WHO) bethi kunobufakazi obanele emzimbeni wocwaningo wokuhlukanisa i-glyphosate njenge i-carcinogen yabantu. Lezo zindaba zazibakhathaza kakhulu abathengi ngoba ukusetshenziswa kwe-glyphosate kusabalele kangangokuba abacwaningi bakahulumeni babhale leli khemikhali njengo “isakazeke kakhulu emvelweni, ”Ezitholakala nasekudleni okuvamile njengoju lwezinyosi futhi oatmeal. Kutholakale ngisho kumasampula womchamo labalimi nabahlala emadolobheni ngokufanayo.
Impikiswano ibambezele izinqumo zokugunyazwa kabusha hhayi e-United States kuphela, kepha naseYurophu. Amazwe amaningana aseYurophu, kufaka phakathi i-Italy neFrance, acele ukuthi kuvinjelwe i-glyphosate ngqo ngemuva kokuthi izinsalela ze-glyphosate zitholakale ekudleni okuningi lapho. Izinsalela ezitholakale emikhiqizweni yesinkwa zigqugquzele umkhankaso othi "Hhayi Ngesinkwa Sethu" eBrithani.
Izifundo eziningi zesayensi emashumini amaningi eminyaka ziye zaphakamisa ukukhathazeka ngemithelela eyingozi ye-glyphosate.
Kepha ngaphandle komthengi angst zombili izinhlangothi ze-Atlantic, i-EPA isivele ikubeke kwacaca ukuthi iyavumelana kakhulu nomyalezo kaMonsanto wokuthi ososayensi bomdlavuza bamazwe omhlaba banephutha. I-ejensi ikhishwe umbiko ngoSepthemba ibeka izizathu eziphakamisa ukuthi i-glyphosate ihlukaniswe ngokuthi "akunakwenzeka ukuthi ibangelwe umdlavuza kubantu."
Ukuthola lokho okutholakele, i-ejensi bekufanele iyehlise ngokungafanele imiphumela yezifundo eziningi zabantu nezilwane ezibonisa ubufakazi bokuxhumana nomdlavuza, ngokusho kososayensi abaningi abacela i-EPA ukuthi ibhekisise isikhundla sayo.
"Kunezimpikiswano ezinamandla zokuhlukaniswa" Okungenzeka kube yi-carcinogenic kubantu "ngoba kunemiphumela eminingi emihle ezilwaneni… kanye nezifundo ezinhle ze-epidemiologic eziqiniswa eminye imigqa yobufakazi (i-DNA kanye nomonakalo we-chromosomal kumaseli womuntu futhi kungenzeka kuvezwe abantu), ”UMaarten Bosland, uprofesa wezifo e-University of Illinois eChicago, ubhale emazwaneni athunyelwe kule nhlangano.
IBosland ingomunye wososayensi abangaphezu kwama-90 okhiphe umbiko onemininingwane ukukhomba ucwaningo oluhlanganisa i-glyphosate nomdlavuza. Bathi ubufakazi obutholakalayo bomuntu bukhombisa ukuhlangana phakathi kwe-glyphosate ne-non-Hodgkin lymphoma; ngenkathi imiphumela ebalulekile ye-carcinogenic ibonakala ezilwaneni zaselebhu zezinso ezingavamile nezinye izinhlobo zamathumba.
Umlando usinikeze izibonelo eziningi zamakhemikhali amenyezelwe ukuthi aphephile amashumi eminyaka kuphela ukuthi kufakazelwe ukuthi ayingozi ngemuva kwezimpikiswano ezinwetshiwe ezifana nalezi manje esizibonayo nge-glyphosate. Kube umkhuba ojwayelekile kubadlali bezinkampani abazuza ngama-ejenti amakhemikhali ukulwela izinyo nezipikili ngokusetshenziswa kwabo okuqhubekayo noma ngabe ukutadisha ngemuva kocwaningo kwakha icala lezindleko zezempilo zemvelo nezomuntu kwesinye isikhathi. Futhi kuvamile ngokufanayo kubalawuli abantekenteke ukwenza njengamabhidi wemboni.
Lokho kubonakala kuyindlela i-EPA eyilandele nge-glyphosate. Kusukela lapho le nhlangano yamemezela ngoJulayi owedlule ukuthi izobamba le mihlangano, iqembu labasebenzi bemboni yezolimo iCropLife America belisebenza ukuqinisekisa ukuthi i-EPA iyazenqaba izinkinga zomdlavuza. AbakwaCropLife baqale basikisela ukuthi i-EPA iyichithe ngokuphelele imihlangano, bethi ayikho “Ukulungiswa kwesayensi” fnoma ukubuyekeza. Usoseshini wabe usubeka imigomo okufanele isetshenziswe yi-EPA ekukhetheni ososayensi abangahle basebenze kuphaneli. Futhi ngemuva kokuthi iphaneli selikhona, uCropLife utshele i-EPA kufanele isuse isazi sezifo uDkt Peter Infante. AbakwaCropLife bambheka njengokuchema embonini. I-EPA iphendule ngokususa u-Infante njengoba uCropLife ebuzile, yabe isinqaba ukuchaza ngesinqumo sayo emphakathini, ikhipha 'cha ukuphawula "kulabo ababuza ngokususwa kuka-Infante.
U-Infante, osebenze njengomxhumanisi ongungoti kwezifo ze-EPA nezindikimba eziningi zomhlaba, uthi izinsolo zokwenzelela azivumelekile, futhi usahlela ukuya khona kodwa kwesinye isikhundla. Ngemuva kokuthi i-EPA imxoshe esigungwini sabeluleki, i-ejensi yavuma ukumnika imizuzu embalwa yokukhuluma nesigungu ngesikhathi umphakathi uphawula ingxenye yohlelo. Kulindeleke ukuthi akhulume ngoLwesine ekuseni.
Kokunye ukusikisela ngokukhetha izimboni, ekuqaleni konyaka, i I-EPA "engahlosile" ithunyelwe esidlangalaleni ukuhlolwa kwangaphakathi kwe-glyphosate kuwebhusayithi yayo okwenze icala lokuphepha kwe-glyphosate. Idokhumende yayikade yanele ngokwanele ukuthi iMonsanto ikwazi ukuyenza akhiphe abezindaba ngenjabulo konke okutholwe yimibhalo nokuhlinzeka ngesixhumanisi sekhophi yombhalo ngaphambi kokuba i-ejensi iwudilize, ichaza ukuthi bekungewona owokugcina.
Izenzo zale nhlangano zishiye izishoshovu zezemvelo nezabathengi zidangele futhi zingabaza ukuthi i-EPA izolalela noma ikuphi ukuhlolisiswa okuzimele kokuphepha kwe-glyphosate.
"Umlando wabo uyesabeka," kusho uPatty Lovera, umsizi womqondisi weqembu lezokuvikela iFood & Water Watch. “Asifuni ukuphonsa ithawula ngokuphelele. Sifuna ukuzama ukubabamba emsebenzini wabo. Kepha kunobufakazi obusobala bethonya lemboni. Abenzi lutho ukukhuthaza ukuzethemba ukuthi bakubhekisisa kahle lokhu. ”
Abathengi bathembele ku-EPA ukubeka phambili izintshisekelo zabo kunezintshisekelo zebhizinisi, futhi i-EPA akufanele ikukhohlwe lokho, ngokusho Kufakwe imibono yomphakathi nguPamela Koch, umqondisi omkhulu weLaurie M. Tisch Center for Food, Education & Policy at Teachers College, Columbia University.
"Sinxusa i-EPA ukuthi isebenzise imigomo yokuvikela kulesi sibuyekezo…" kubhala uKoch. "Sikholelwa ukuthi ukunakekela impilo yomphakathi kubaluleke kakhulu futhi kudinga imithetho evikela abasebenzi basemapulazini, abasebenzi abafaka i-glyphosate ezindaweni ezingezona ezolimo, kanye nomphakathi wonkana."
Lesi sihloko ekuqaleni savela The Hill
UCarey Gillam uyintatheli emnkantshubomvu, phambilini obekwiReuters, oqondisa ucwaningo lwe-US Right to Know, iqembu elingenzi nzuzo lokufundisa abathengi eligxile ekuphepheni kokudla nezindaba zenqubomgomo. Landela @CareyGillam ku-Twitter
Ukudla Okucatshangwayo, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane Bayer, UCarey Gillam, CropLife Melika, UDkt Peter Infante, EPA, glyphosate, Monsanto